Israel oo dhisanaysa Daanta Galbeed - BBC Somali - Warar
Israel oo dhisanaysa Daanta Galbeed
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 1 December, 2012, 10:35 GMT 13:35 SGA
Guryaha ay Israel ka dhisanayso dhulka ay ka haysato Falastiiniyiinta.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa dhaleecaysay Israel go'aanka ay ka dhisayso saddex kun oo guri dhulka ay falastiiniyiinta ka hasato ee Bariga Jerusalem (Qudus) iyo Daanta Galbeed.
Hilary Clinton waxay sheegtay in si kasta ay Israel u adkayso difaaceeda, ma xaqiijin karto ammaankeeda. Waxay sheegtay in amaankeeda uu ku imaan karo oo kaliya heshiis nabadeed.
Go'aanka Israel ayaa yimid maalin ka dib markii Qaramada Midoobay ay u aqoonsatay Falastiiniyiinta inay yihiin dal goob joog ka ah Qaramada Midoobay, laakiin aan xubin ka hayn.